ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ နိုဝင်ဘာ (၆) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ သက်တမ်းဝက် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Lame Duck, Golden Parachute နဲ့ Wake-up call တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
Lame (နာနေတာ)၊ duck (ဘဲ) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နာနေတဲ့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေကျိုးလို့ အတောင်ကျိုးလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းအရတော့ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ရာထူးလက်ကိုင်ရှိသူတဦး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ မဲဆွယ်လှုပ်ရှားခဲ့ပေမယ့် ပြန်လည်ရွေးကောက်မခံရဘဲ အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ရည်ညွှန်းအသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုသက်တမ်းဝက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောက်နဲ့အထက်လွှတ်တော်အပြင် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရာထူးတွေမှာ ဝင်ရောက်ရွေးခံကြရာမှာ ပြန်ရွေးချယ်မခံရတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ပြန်အရွေးမခံရတဲ့အမတ်တွေကတော့၂၀၁၉ ဇန်န၀ါရီလ (၃) ရက်မှာ စတင်မယ့် (၁၁၆) ကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်သစ်မခေါ်ယူမီ လက်ရှိရာထူးမှာ (၂) လ နီးပါးကြာ တာဝန်ဆက်ထမ်းကြရမှာဖြစ်ပြီး Lame Duck အနေအထားမှာရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ လက်ရှိ Republican တွေကြီးစိုးနေတဲ့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ရဲ့ သက်တမ်းဟာလည်း လွှတ်တော်သစ်စတင်မယ့် နောက်နှစ် ဇန်နဝါရီလဆန်းမှာ သက်တမ်းကုန်မှာမို့ လက်ရှိလွှတ်တော်ကို Lame Duck Congress ဆိုပြီး သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ကိုးကားရေးသားကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Lame duck ဆိုတဲ့ အီဒီယံအသုံးကို နိုင်ငံရေးလောကမှာ သမတ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မြို့ တော်ဝန် စသဖြင့် ရာထူးအမျိုးမျိုးမှာ သက်တမ်းကုန်ဖို့ အချိန်ပိုင်း၊ လပိုင်းအလို ရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ရည်ညွှန်းသုံးပါတယ်။ ဒီ Lame duck ဆိုတဲ့ အသုံးဟာ စီးပွားရေးလောက က ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ London Stock ဈေးကွက်မှာ stocks တွေ ရှုံးလို့ အကြွေးပြန်မဆက်နိုင်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှင်တွေကို ရည်ညွန်းပြောရာကနေ နိုင်ငံရေးလောကထဲ ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဆို လက်ရှိရာထူးမှာ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဖို့ ရက်အကန့်အသတ်တော့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့  လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာ သိပ်မရှိတော့တဲ့အတွက် အတောင်ကျိုးလို့ မပျံနိုင်တော့တဲ့ ငှက်လို၊ ခြေနာလို့ ခရီးကို ထော့ကျိုးထော့ကျိုးနဲ့ ဆက်လျှောက်နေရတဲ့ Lame duck ပုံရိပ်မျိုး ဖြစ်နေတာပါ။ တနည်းဆိုရင် လက်ရှိရာထူးမှာ မီးစာကုန် ဆီခမ်းတဲ့ အခြေဆိုက်တာ၊ ပွဲပြီးလို့ အိမ်ပြန်ဖို့ ဖျာလိပ်ရတဲ့သဘောမျိုး၊ အလုပ်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
The Governor of our state ended up asalame duck when he lost in the elections.
ကျနော်တို့ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးနှိမ့်သွားတဲ့အတွက် အတောင်ကျိုးတဲ့ ငှက်ဘဝ ရောက်နေရှာပြီ။
Golden (ရွှေ)၊ Parachute (လေထီး) ဖြစ်ပြီး၊ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ရွှေလေထီး ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ပျံရင်း၊ တခုခုဖြစ်ရင် အသက်မသေရအောင် မြေပြင်ကိုလေထီးနဲ့ ခုန်ချလေ့ရှိသလို၊ ရွှေလေထီးလို့တင်စားသုံးတဲ့ ဒီ Idiom အဓိပ္ပါယ်က နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ရာထူးကြီးတွေမှာ ပြန်ခန့်အပ်ခြင်း မခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နဲ့ လုပ်သက်စေ့ပြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် နောင်ရေးစိတ်အေးပြီး မကြောင့်မကြနေထိုင်နိုင်အောင် တနည်း ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေ အခက်အခဲ မရှိရလေအောင် အထက်က ကြည့်ရှုစောင့်မပေးတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။။ တခါတရံလဲ တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ၊ ဥပဒေ လုပ်ငန်းတွေမှာ အကြံပေးတွေ၊ အမှုဆောင်အရာရှိတွေအဖြစ် ပြန်ပြီးဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တနည်း ရွှေလေထီးဟာ အကျကောင်းအောင်၊ အကျသက်သာအောင် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အထူးခံစားခွင့်သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
Congressman Smith lost in the election, but he gotagolden parachute. He was offeredaVice President post atabig company in New York .
အောက်လွှတ်တော်အမတ် Smith ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ အကျကောင်းတယ်။ နယူးရော့က Company ကြီးတခုမှာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရတယ်။
(၃) Wake-up call
Wake-up (အိပ်ရာကနေနိုးတာ)၊ call က ဒီနေရာမှာ တယ်လီဖုန်းခေါ်တာဖြစ်ပြီး ၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတယောက် အိပ်နေတာကို နိုးဖို့ တယ်လီဖုန်းခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကတော့ ဟိုတယ်တွေမှာ တည်းခိုကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ မနက်စောစောထ နိုးစေချင်ရင် ဟိုတယ်ဧည့်ကြို counter ရှိ ဝန်ထမ်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ကိုယ့်အခန်းကို တယ်လီဖုန်းဆက်နိုးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ဓလေ့ကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က အခြေအနေတခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်ထင်ထားသလို အဆင်ပြေနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ဖြစ်ရပ်တခုခုက နိုးဆော်ပေးရာရောက်တာ၊ အသိတရားဝင်စေတာ၊ သတိပေးရာ ရောက်တာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဆို ပြီးခဲ့တဲ့သက်တမ်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတ Donald Trump က ၀င်ရွေးခံခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့်၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ သူ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်လူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒ ကို ထုတ်ဖေါ်ပြသတာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေက ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လဲ အထက်ကော အောက်လွှတ်တော်မှာပါ Republican တို့ထိန်းချုပ်ထားပြီး အိမ်ဖြူတော်မှာလည်း သမ္မတ က Republican ပဲ ဖြစ်နေတော့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်ကြား check and balance လုပ်နိုင်စွမ်းနဲခဲ့လို့လည်း သမ္မတ က သူလုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်ဖို့ လွယ်ကူခဲ့တဲ့အပြင်၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရမ်းရမ်း ပြောဆိုရေးသားတာတွေလည်း ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုသက်တမ်းဝက်မှာ အမေရိကန်လူထုက စံချိန်ကျိုးမဲထွက်ပေးခဲ့ကြပြီး Democrat တွေက အောက်လွတ်တော်မှာ အမတ်နေရာအများစု ရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ဒီ အခြေအနေဟာ ၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပမယ့် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမျာ သူ ပြန်နိုင်မယ့် အလားအလာမှာ စိုးရိမ်စရာရှိနေတဲ့အတွက်၊ ဒီသက်တမ်းဝက် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ သမ္မတ Trump အတွက် wake-up call ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အလားတူဘဲ Texas ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်း Republican အစွန်းရောက်တွေက မှန်းထားခဲ့ကြသလို အနိုင်မရခဲ့ကြလို. “Election night wake-up call” ရွေးကောက်ပွဲညဟာ အသိတရားရစေတဲ့ည ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
Losing nearly half of the seats contested in the by-elections wasawake-up call for the ruling party.
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အမတ်နေရာ တဝက်နီးပါးကို ဆုံးရှုံးခဲ့တာဟာ အာဏာရပါတီအတွက် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတိပေးရာရောက်တယ်။
ဒီတပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမှာ Lame Duck, Golden Parachute နဲ့ Wake-up call တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။